Mashandisiro Ekushandisa Tepi Yehove？ -News-Ningbo Judin Yakakosha Monofilament Co., Ltd.
Mashandisiro Ekushandisa Tepi Yehove？
Nguva: 2021-06-25 Hits: 2
Tepi dzehove dzinowanzouya mu50 'uye 100' kureba. Kuti ubudise tepi kubva vhiri, iwe tinya bhatani kana kudhonza lever pamusoro kana padyo nemubato. Izvi zvinoburitsa tepi uye zvinokutendera iwe kuti ungodhonza kunze kwegumbo. Iwe unobva wadyisa iyo tepi mumukoto paunenge uchisunungura kubva pavhiri. Kana iyo tepi ichibuda kubva kune imwe kumucheto kwetanho, mubatsiri anonamatira tambo kumucheto kwetepi, iyo ine ziso-senge chirauro, ipapo iwe unodhonza iyo tepi kudzoka kuburikidza nemukoto pamwe newaya mune taw. Kuti mudzimure tepi yehove kuti idzokere mukati, bata pakati pevhiri neruoko rumwe uye tendeuka mubato nerumwe. Izvi zvinomutsa tepi mukati megumbo.
Maitiro Ekudhonza Magetsi waya kana Cable Kuburikidza neKodhi
Kubatanidza tambo dzinoverengeka kutepi yehove, bvisa kuputira kwekunze kubva pawaya uye kuputira waya dzisina kupfeka kuburikidza neziso kumagumo kwetepe rehove. Dzorera tambo yakakomberedza tambo dzese dzakabatanidzwa uye nekuputira musoro wese wecheni yekubatanidza netepi yemagetsi. Kuwedzera girobhu-inodhonza waya inoita kuti kudhonza kuve nyore. Kana basa rodaidzira tambo hombe mumukoto, magetsi anokwanisa kushandisa tepi yehove kudhonza tambo, wobva washandisa tambo kudhonza waya. Kunyangwe iyo waya yesimbi iri yakasimba uye ichichinjika, haisi zano rakanaka kudhonza mutoro unorema zvakanyanya nechombo ichi.
Kana iwe uri iwe wakamira pabhokisi kudyisa waya, dhonza ese waya akafanana zvakaenzana kubva kuma spools avo iwe paunofudza waya mumugwagwa. Zvakare, edza kuchengeta waya dzisina kutenderedzwa paunenge uchivapa. Zora waya uye udziise mupombi neruoko rumwe, uye shandisa rumwe ruoko kudhonza tambo kubva pama spools.
Kana iwe uri iye munhu ari kunyatso kuita kudhonza kune rimwe divi, dhonza waya mukati maviri- kusvika matatu-tsoka tsoka. Mira, kuverenga kusvika mana, uye wozodhonza zvakare. Tarisa nemunhu ari kudyisa kuti uone kana iri danho rakanaka kwavari. Kudhonza nekukurumidza kunogona kudonhedza waya uye kubata zvigunwe zvemubatsiri wako mubhokisi. Siya nguva yakaringana pakati pekudhonza kuitira kuti munhu ari kudyisa ave nenguva yekuzodza waya uye nekukwevera zvakakwana kubva muma spools kuti apinze mumukoto. Chiratidzo chakareruka chekuzivisa mumwe nemumwe kuti wagadzirira kudhonza kunotevera kubata pombi nemudziyo wesimbi.
Prev: Chii chinonzi Tepi yeHove?
Zvadaro: Musangano wakabatikana pamberi peCNY